Şenbay, မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးကနေအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ရုပ်သိမ်းပေးရန် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Şenbay, မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးကနေအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကနေ Senbay ရုပ်သိမ်းရေး, မြေအောက်ရထား, ဆောက်လုပ်ရေး
မြို့လယ် Gayrettepe Bayburt Group မှမှလေဆိပ်ကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုမည်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်, သစ်ကိုလေဆိပ်မက်ထရိုŞenbayသတ္တုတွင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏မိတ်ဖက်တစ်ဦးစီမံကိန်းကနေနုတ်ထွက်သွားကြသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာ, Kolin, Cengiz Şenbayနှင့် galleon ယူခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးအဆုံးနေ့စွဲ 2017 2017 မတိုင်မီလိုင်းပေါ်တွင်စတင်တဲ့အခါ, 2018 ၏အဆုံးပြီးနောက်, 2019 နောက်ပိုင်းမှာသူဟာနောက်ဆုံးတော့သမိုင်း 2020 ရှင်းပြ 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သေးပြီးစီးခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှု၏အဖြစ်ခဲ့ပြီ။
အစ္စတန်ဘူလ်, သစ်ကိုလေဆိပ်သစ် Gayrettepe-Airport- နှင့်အတူမြို့လယ်မှလေဆိပ်ကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုတံ့သောHalkalı ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လိုင်းများ, program ကိုဝေးလွန်းနောက်ကွယ်မှရွေ့လျားနေသည်။ အဆိုပါလေဆိပ်သစ်မှ Gayrettepe-line ကို Bayburt Şenbayသတ္တုတွင်း Group ၏ကုမ္ပဏီထံမှနှစ်ခုမိတ်ဖက်သည်ထင်ရှားစီမံကိန်းကနေနုတ်ထွက်ကြောင်းယူဆ။
Sözcü Cigdem Toker လေဆိပ်ကနေသတင်းစာဟာမက်ထရိုအတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်? ' စုစုပေါင်းအရွယ်အစားအဘို့အ 12 ဘီလီယံခန့်နှုန်း, ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆောင်းပါးမှာတော့၏နှစ်ခုအဓိကမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းက "ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြီးဆုံးအမျိုးသားရေးစီမံကိန်းကိုရောက်ရှိရန်လိုအပ်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဆိုပါမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းအပေါ်င့်အဘယျသို့တွေရဲ့ရန်ခံရဖို့မျှော်လင့်ထားသလဲ?" သူကမေးတယ်။
အဆိုပါ Toker Sözcü'' ဆောင်းပါး Published said: သင်ဟာဆောက်လုပ်ဆဲကမ္ဘာ့နှစ်ခုမက်ထရိုလိုင်းများမနာလိုအစ္စတန်ဘူလ်ကျွန်တော်တို့ကို၏မြို့လယ်မှလေဆိပ်ကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသွားမှာပါသိစုစုပေါင်းအရှည် 70 ကီလိုမီတာ Gayrettepe-Airport- လေဆိပ်သစ်နယူးနှင့်အတူချဉ်းကပ်ရန်Halkalı.
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုပေးမည် Gayrettepe-လေဆိပ်သစ်တင်ဒါအသားအကြောင်း 1 ဘီလီယံယူရို Kolin / Şenbayမိတ်ဖက်တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်။
ယင်းမက်ထရိုလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်အတွက်နှစ်ခုမိတ်ဖက်တစ်ဦး၏ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 21 / ခသတ္တုတွင်းစီမံကိန်းများမှဆုတ်ခွာ Bayburt Şenbay၏ Group ၏ကုမ္ပဏီများကလုပ်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
လူသုံးစု၏Şenbay-သင်ယူခြင်းရှယ်ယာသတ္တုတူးဖော်ရေးşaşırmayacağınız-ကျော်ယူကြပြီ: တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နူးညံ့ Kolin, အခြားနှစ်ခုနှင့်အတူ Cengiz galleon နှင့်အတူဝင်။
Gayrettepe Metro လေဆိပ်အတွက်နယူး State-အဆောက်အဦအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီများ၏မှတ်တမ်းများအဆိုအရ:
သဘောပေါက်မှုနှုန်း၏နေ့စွဲသည်အထိဧရာ: ရာခိုင်နှုန်း 40.63
အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးရာခိုင်နှုန်းနှုန်းကို 59.37 ၏နေ့စွဲပြီးနောက်ကျင်းပလိမ့်မည်
တတ်နိုင်သမျှ "ကိုဖတ်": 2016 အတွက်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကတည်းက 2017 နှစ်ပေါင်းရဲ့အဆုံးမှာဖိတ်ကြားချက်ကို၏နည်းလမ်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှု, ပထမ, ထို့နောက် 2018 အဆုံးအဆုံး 2019 နည်းနည်းဖော်ပြထားဖြစ်စေ, နောက်ဆုံးမှာ 2020 လျင်ရက်ရွှေ့ဆိုင်း Gayrettepe-လေဆိပ်သစ်မက်ထရိုယနေ့အထိအဆောက်အဦး၏ထက်ဝက်ရောက်ရှိကြဘူး။
သငျသညျပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးယုံကြည်သည်ဆိုပါက, ကြွင်းသောအရာသေးလေးတစ်နှစ်ခွဲလအတွင်းကျော်လို့ယူဆတယ်လေဆိပ်မက်ထရို၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်။
ဟုတ်မဟုတ်ယူရိုကျော် 2016 / 504725 နူးညံ့သောမှတ်ပုံတင်နံပါတ် Gayrettepe-လေဆိပ်သစ်တင်ဒါနျကွိုးစားလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းယင်းစာချုပ်၏ယူရို 2016 1 3.5 အဆုံးရှိသောကြောင့်, 3.5 ဘီလီယံကိုဝန်ကြီးစာချုပ်ကာလ၏အရွယ်အစားအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်စမ်းကြည့်ပါ။ ယူရိုနှုန်း 6.3 ယနေ့။
ယင်းမက်ထရိုနယူး -Airport Airport- ၏အခြားလိုင်းHalkalı'' စာချုပ်နေဆဲမူရင်းအဆောက်အဦး-Kolin ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်တစ်ဦး Bayburt Group မှမတ်လ 2018 ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်လျှင်။ စာချုပ်အရွယ်အစား4294 သန်းဘီလီယံခန့် 713 တထောင် TL ။ (ထိုနေ့ရက်သည်များအတွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းအရသိရသည် 4.8 နှုန်းတစ်ခုမှာယူရို။ )
မကြာမီတွင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူရင်းအဆောက်အဦး-Kolin ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်အပြီး, သာမန်မိတ်ဖက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Cengiz, Galleon နှင့် Kolinda အားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေး၌ဤမိတ်ဖက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသစ်ကို Airport- မှတ်ပုံတင်ရန်Halkalı မြေအောက်ရထားသည့် 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖျော်ဖြေအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
တနည်းအားဖြင့် Kolin စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (လေဆိပ်) ၏အဟောင်း 80 ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ခုမိတ်ဖက်စေရန်ကုမ္ပဏီထူထောင်ခဲ့သောမကြာမီပြီးနောက်နု Bayburt Group မှကုမ္ပဏီဝင်ရောက်။
အဘယ်အရာကိုဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်, ဤအခြိနျတှငျ Bayburt Şenbayအုပ်စုကိုကုမ္ပဏီအတွက် Gayrettepe-နယူးလေဆိပ်နှင့်အတူမက်ထရိုရဲ့ပထမဦးဆုံးလိုင်း၏ 70 ကီလိုမီတာ, ရှယ်ယာကျော်အတူတူသုံးကြောင်းလိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Bayburt Şenbayသတ္တုတွင်း Group နဲ့မူရင်းအဆောက်အဦးနှစ်ဦးစလုံးနှစ်ခုရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်းများကို၏အစကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာမြေအောက် circuit ကိုသွားပြီးနောက်ရှိသေး၏။
ဒီနေ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများမှာနယူးလေဆိပ်မက်ထရို Gayrettepe-ကုန်ကျစရိတ် 6.3 ဘီလီယံအထိ။ နယူး Airport-Halkalı ဒီနေ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများ (အကောင့်သို့မတ်လ 2018 အပေါ်ယူရိုငွေလဲနှုန်းတာ) 5.6 ဘီလီယံခန့်နှင့်အတူမက်ထရိုစာချုပ်ငွေပမာဏ။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးဒီနေ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများမှာနှစ်ခုမြေအောက်ရထား 12 ဘီလီယံခန့်၏အရွယ်အစား, ငါတို့နှစ်ဦးကိုလေလံအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
Metrosuz တစ်ဦးချင်းစီဝေဖန်ဖို့ပွင့်လင်းလေဆိပ် "အသရေဖျက်မှု" နှစ်ခုအဓိကမြေအောက်ရထား၏စုစုပေါင်းအရွယ်အစား 12 ဘီလီယံခန့်နှုန်းဟာမြို့တော်စီမံကိန်းများတွင်ဤကာလနှင့်ဆိုင်းaçıklasınlarနှောငျ့ယှကျသူကိုထို။
Kars-Tbilisi မီးရထားဆောက်လုပ်ရေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ခွဲများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရနှင့်Şenbayသတ္တုတွင်း၏ Superstructure ဆောက်လုပ်ရေး - Ermita အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါဖက်စပ်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 26 / 04 / 2013 အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကဆောင်ရွက်ရမည့်အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, တူရကီ - နုနှင့် ပတ်သက်. အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ဂျော်ဂျီယာ Kars-Tbilisi မီးရထား Sub နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏ Superstructure ပြီးစီးမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နုဆုံးဖြတ်ချက် JCC မှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုŞenbayသတ္တုတွင်းအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက် - Ermita အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါဖက်စပ်အပေါ်ဧပြီလ 08 2013 549.266.529 ပေါင်ပေါ်မှာစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လူသိများသည်အတိုင်း, JCC မကြာသေးမီက Comsa - ဖွင့်ပွဲ - Sezai နှင့်Gülermakဖက်စပ် - Kolin ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်၏နူးညံ့၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံဝင်ငွငျးပယျခဲ့သညျ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 711.740.804,09 ပေါင်၏ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်ကဲ့သို့အခြားကုမ္ပဏီများ designated tenderer: Comsa - ...
NEW xnumx.havalim-Gayrettepe Metro Kolin မိတ်ဖက်အဆိုပါŞenbay- Build မှ 05 / 12 / 2016 NEW-Gayrettepe Metro Package ကို Build ဖို့Şenbay-မိတ်ဖက် xnumx.havalim: အလုပ်334 ၏အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်ရထားလိုင်းစစ်တမ်း-စီမံကိန်းနယ်ပယ်သစ်လေဆိပ်နှင့်အတူအရှည်ရှည် Gayrettepe-ကီလိုမီတာကီလိုမီတာ Halkalı-New လေဆိပ်သစ်ကိုလေဆိပ်ရထားလမ်း၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း Gayrettepe-နူးညံ့ပြီးစီးခဲ့ပါသည်အဖြစ်ဖော်ထုတ် 65 ကီလိုမီတာအပါအဝင်ရထားလမ်း၏ပေါင်းလဒ်, အဖြစ်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ စျေးပြိုင် 999 769 တထောင်သန်းယူရိုကုန်ကျစရိတ်-Şenbay Kolin ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ် 20183၏ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက Metro လိုင်း။ လေဆိပ်များဖွင့်လှစ်ထမြောက်တော်မူခံရဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့လေဆိပ်သစ်အဆုံးရောက်ရှိသည့်ရထားလမ်း system ပေါ်တွင်အလုပ်အတွက်တင်ဒါမှŞişli- Gayreteppe ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ နယူးလေဆိပ် Gayrettepe မက်ထရိုလိုင်းတင်ဒါŞenbay-Choline ...
TCDD တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အလီ Fuat Pasha - အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူရာမှ Dogancay Şenbay - မူလသတ္တုတူးဖော်ရေးဖက်စပ်အနိုင်ရ 26 / 04 / 2013 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) တူရကီ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Dogancay Ripaj စီမံကိန်းပထမဦးစွာပုဒ်မ၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာအလီ Fuat Pasha - Dogancay ထံမှ (ကီလိုမီတာ 132 + 560-143 + 661 (သို့ပြန်သွားရန်) သည်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏အပိုင်း အကြောင်းကိုအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ဂျာနယ်အမိန့်အရသိရသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု; ။ ။ 499.405.304,00 ပေါင်လေလံ POUNDS အဖြစ်ကုန်ကျစရိတ် 238.000.000 တင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. Şenbayဖော်ထုတ် - မူလသတ္တုတွင်းနုအနိုင်ရသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်အဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဖက်စပ်အနိုင်ရအဲဒါကိုလူသိများသည်အဖြစ်အခြားကုမ္ပဏီများတင်ဒါပါဝင်ခဲ့အောက်ပါအတိုင်း။ Cengiz - Fera မှ IC Ictas - Koçoğluဆောက်လုပ်ရေး Kolin - Gülermak ...
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အလီ Fuat Pasha - Dogancay Şenbayအကြားအခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ - မူလစာချုပ်ဖက်စပ်သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 24 / 05 / 2013 TCDD တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အလီ Fuat Pasha - အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးကနေ Dogancay နုŞenbayအနိုင်ရ - မူရင်းသတ္တုတူးဖော်ရေးစာချုပ်ဖက်စပ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) တူရကီ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု - ထိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအောက်တွင်အစ္စတန်ဘူလ် Dogancay Ripaj ပထမဦးစွာပုဒ်မ အလီ Fuat Pasha - အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါနှင့်ဆက်စပ်သော Dogancay (ကီလိုမီတာ 132 + 560-143 + 661 (သို့ပြန်သွားရန်) အသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကနေဖြတ်ပိုင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ်အမိန့်အရသိရသည်။ , တစ်ဦးကိုနူးညံ့Şenbay - နှင့်အတူမူရင်းသတ္တုတွင်း 10 ဖက်စပ် စာချုပ်မေလ 2013 238.000.000 ပေါင်ပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ...
3 ။ flash ကိုလေဆိပ်အဘို့အတောင်းဆိုမှုများ: ဒတျချြကုမ္ပဏီရုပ်သိမ်း 20 / 02 / 2017 ကျနော်တို့ရက်စွဲ, ဖော်ပြချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏3မှရာ၌ခန့်ထားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူခံဝင်ဘို့အ xnumx.havalim စီမံကိန်းအသစ်: စီမံကိန်းကို applications များ၏လယ်ပြင်တွင်စေ့စပ် NEW xnumx.havalim ဒတျချြကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သတင်းအရသိရသည်မြောက်သစ်တောကာကွယ်ရေးအတွက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤစီမံချက်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာအတွက်မီးမောင်းထိုးပြသည့်အတိုင်း, ငါတို့အနေနဲ့လေဆိပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကိုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ကိုပြင်ဆင်; စီမံကိန်းရဲ့ EIA ကိုအစီရင်ခံစာကိုလည်းအဆက်မပြတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြခိုင်မြဲပါလိမ့်မယ်သောအိမ်ခြံမြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ sirkat, မြောက်တောပြောခဲ့သကဲ့သို့, ငါတို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။3။ လေဆိပ်စီမံကိန်းနှင့်လည်းအထူးသဖြင့်ခွဲဝေကြီးမားသောမြေယာ Consortium အဖွဲ့ဝင်ရန်ဤအကြီးအကဲအထောက်အထားအပါအဝင်ဒေသတွင်းအရာရှိများက၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုကြေညာခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအမည်အောက်တွင်အမှန်မှာထို "လေဆိပ်စီးတီး"3။ လေဆိပ် ...
တူရကီ - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) မီးရထားစီမံကိန်းဟောငျးနှင့်Şenbayအဆိုပါ superstructure ထောက်ပံ့ရေးသတ္တုတွင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါ - Ermita အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါဖက်စပ်အနိုင်ရ 20 / 06 / 2012 ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြီးစီးခဲ့သည်နု၏အကဲဖြတ်ဖို့ related လေ့လာမှုများ - "၏ဂျော်ဂျီယာ (Kars-Tbilisi) မီးရထား Sub နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏ Superstructure ပြီးစီးတူရကီ" အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမတ်လ 26 2012 ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, သမိုင်းများတွင်ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုစုဆောင်း။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အဆိုပြုချက်နှင့်အတူŞenbayနူးညံ့ 549.266.529 သတ္တုတွင်း POUNDS ဆိုပါတယ် - Ermita အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါဖက်စပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အရာရှိများလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်နူးညံ့၏ရလဒ်များကို ပတ်သက်. အာဏာပိုင်များ၏ခွင့်ပြုချက်သူတို့ရဲ့ဖက်စပ်သဘောတူညီချက်မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ 711.740.804,09: လူသိများသည်အဖြစ်ပေါင် 1 များ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောတင်ဒါအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်, အခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ Comsa - ဖွင့်ပွဲ - ။ Sezai ဆောက်လုပ်ရေး2...
Afyonkarahisar - Usak (Banaz) ကဏ္ဍေူပာင်းလဲရေးစီမံကိန်း Afyonkarahisar တိုက်ရိုက် JCC Şenbay - စွမ်းအင်နဲ့ပါရှ၏အသက် - စွမ်းအင်အောင်မင်း - ထို NYSE တည်ဆောက်ခြင်းဖက်စပ်၏အယူခံပယ်ချ 11 / 09 / 2015 TCDD Afyonkarahisar - Usak (Banaz) ကဏ္ဍ Afyonkarahisar တိုက်ရိုက်ကူးအပြောင်း Project မှ JCC Şenbay - စွမ်းအင်နဲ့ပါရှ၏အသက် - Mir စွမ်းအင် - ANN ဗိသုကာလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေတူရကီပြည်နယ်မီးရထားတစ်ဦးဖက်စပ်၏အယူခံ (TCDD) ပယ်ချခဲ့ "တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း" "- Usak (Banaz) ဖြတ် (ကီလိုမီတာ 194 325 + - 268 ကီလိုမီတာကနေ + 000) Afyonkarahisar တိုက်ရိုက် Crossing အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် Afyonkarahisar" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်၏နယ်ပယ်အတွင်း။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, JCC Şenbay - စွမ်းအင်နဲ့ပါရှ၏အသက် - စွမ်းအင်အောင်မင်း - ထို NYSE တည်ဆောက်ခြင်းဖက်စပ်၏အယူခံပယ်ချလိုက်သည်။ ဒီအ ...
Elmadağ - Kirikkale Şenbayသတ္တုတွင်းမီးရထားစီမံကိန်း - ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံဖက်စပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်, အနိုင်ရ 22 / 04 / 2016 TCDD Elmadağ - Kirikkale မီးရထားစီမံကိန်းŞenbayသတ္တုတွင်း - ပုဒ်မ II ကို (Elmadağ - Kirikkale) မှ Kirikkale - ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံ 2013 TL အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်Deıniryolအိမ်ခြံမြေညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ, 185988 / 826.776.846 JCC နံပါတ်နှင့်Kayaşတစ်ဦးဖက်စပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်, အနိုင်ရခဲ့ (V7 Viaducts မှလွဲ. -V9-V10-V15) (ကီလိုမီတာ + 45 440-74 + ıxnumx) Şenbayသတ္တုတွင်းဆောက်လုပ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ - မူလဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ် IRB ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသောအမှု, အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ JCC ၏ရလဒ်အမှု၌, ထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲသို့ဖက်စပ်၏အဆိုပြုချက်ကိုယူညွှန်ကြားမှုမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ ဒီအဆင့်မှာဆုံးဖြတ်ချက်, TCDD အားဖြင့်ဆန်းစစ်ရမည်။ အတိတ်ကာလ၌ရှိပေါ်ပေါက်ရေး ...
Marmaray စီမံကိန်းနှင့်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းရက်စွဲများ၏အဖွင့်ရှေ့ကိုပြောင်းရွှေ့ 28 / 09 / 2012 အစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ, Marmaray စီမံကိန်းများ၏ဖွင့်လှစ်အောက်တိုဘာလ 29 2013 အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ စီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇင်ဘာလ 2008 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ Marmaray စီမံကိန်းအရေအတွက်က 40 ဘူတာရုံအာရှနှင့်ဥရောပနှစ်ဖက်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 76.3 ၏လိုင်း 13.6 ကီလိုမီတာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှည်လျားကီလိုမီတာပင်လယ်ကိုအောက်မှာ built လျက်ရှိသည်။ ရွှေ့ဖို့တလမ်းတည်းအတွက်တစ်နာရီကို 75 တထောင်ခရီးသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို2မိနစ်, ဤလိုင်းများပေါ်ရွှေ့ဖို့ရထား။ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါ Uskudar-Sirkeci4မိနစ်ကိုယူပါစေ။ Gebze ထံမှSöğütlüçeşmeမပါဘဲမိနစ်Yenikapı 12, Bostanci ထံမှ Bakirkoy မှ 37 မိနစ်, Halkalı'' ပု 105 မိနစ်သို့မဟုတ်ကြာကြာခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်အောင်မြင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာပေမည်။ source: က Hurriyet
Cable ကို Izmit ပင်လယ်ကွေ့ပေါင်းစည်းရိုက်ကူး 28 / 01 / 2015 Izmir အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအရေးအပါဆုံးတိုင်တဦးဖြစ်သည့် 3.5 Orhangazi Gebze-Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်း, အ Izmit ဂလားပင်လယ်အော်တံတား၌ သာ. အရေးကြီးသောခြေလှမ်းလွန်ခဲ့ခရီးကိုအချိန်လျှော့ချပါလိမ့်မယ်: cable ကိုယူ Izmit ၏ပင်လယ်ကွေ့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များယခုလမ်းညွှန်အဓိက koblo ကုန်းပတ်ဆောင်ရွက်မည်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရေးဆွဲခဲ့သည်လိမ့်မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ပင်လယ်အော်နှစ်ဖက်စလုံးစညျးခဲ့သညျ။ အဆိုပါ Izmit ပင်လယ်ကွေ့ရပ်ဆိုင်းမှုတံတားကနေယာဉ်ရွှေ့ဖို့တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာ6မိနစ်ကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကုန်းပတ်ယခု cable ကိုလမ်းညွှန်များ၏စစ်ဆင်ရေးများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့စက်ရုပ်ရိုက်ကူးအဓိက koblo စတင်ကိုင်တွယ်ရန်ကိရိယာရပါလိမ့်မယ်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့တော်၌ဆွဲအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်, ပင်လယ်အောက်မှာဒီလမ်းညွှန်ကြိုးတွေထို့နောက်နှစ်ခုတာဝါတိုင်များအကြားကိုဆန့်ခြင်းနှင့်သင်္ကေတဆိုသော်ငြားတံတားကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ...
Bayburt Group မှ
Gayrettepe အစ္စတန်ဘူလ်က Metro လေဆိပ်တင်ဒါ
နယူး Gayrettepe Metro လေဆိပ်
Kars-Tbilisi မီးရထားဆောက်လုပ်ရေးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ခွဲများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရနှင့်Şenbayသတ္တုတွင်း၏ Superstructure ဆောက်လုပ်ရေး - Ermita အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါဖက်စပ်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
NEW xnumx.havalim-Gayrettepe Metro Kolin မိတ်ဖက်အဆိုပါŞenbay- Build မှ
TCDD တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အလီ Fuat Pasha - အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူရာမှ Dogancay Şenbay - မူလသတ္တုတူးဖော်ရေးဖက်စပ်အနိုင်ရ
3 ။ flash ကိုလေဆိပ်အဘို့အတောင်းဆိုမှုများ: ဒတျချြကုမ္ပဏီရုပ်သိမ်း
တူရကီ - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) မီးရထားစီမံကိန်းဟောငျးနှင့်Şenbayအဆိုပါ superstructure ထောက်ပံ့ရေးသတ္တုတွင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါ - Ermita အင်ဂျင်နီယာအဆိုပါဖက်စပ်အနိုင်ရ
Afyonkarahisar - Usak (Banaz) ကဏ္ဍေူပာင်းလဲရေးစီမံကိန်း Afyonkarahisar တိုက်ရိုက် JCC Şenbay - စွမ်းအင်နဲ့ပါရှ၏အသက် - စွမ်းအင်အောင်မင်း - ထို NYSE တည်ဆောက်ခြင်းဖက်စပ်၏အယူခံပယ်ချ
Elmadağ - Kirikkale Şenbayသတ္တုတွင်းမီးရထားစီမံကိန်း - ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံဖက်စပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်, အနိုင်ရ
Cable ကို Izmit ပင်လယ်ကွေ့ပေါင်းစည်းရိုက်ကူး